မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အချိတ်အချက်မိနေစေမယ့် Locator App များ -
ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ မိသားစုလုံခြုံရေးအတွက် ခေတ်မီနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ လုံခြုံစိတ်ချရအောင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဆိုတာတွေကို သိနိုင်မယ့် Family Locator App ကောင်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်…
ဒီ Family Locator App တွေက ကိုယ့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကောင်းကောင်း Track လုပ်မယ့် App တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Track လုပ်ထားခြင်းက လူကြီးပိုင်းသာမက ကလေးတွေအတွက် လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုခေတ် Smartphone တိုင်းလိုလိုမှာ GPS Feature တွေ ပါဝင်လာကြတဲ့ အတွက် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Family Locator App တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Min Thuta/ Monday February 22nd, 2021/ Blog/0Comment